UZwelonke ulumkisa amadoda ngokumfamekiswa luthando | Ilisolezwe
UZwelonke ulumkisa amadoda ngokumfamekiswa luthando
Iindaba / 20 April 2017, 02:00am / Sinikelo Goqweni
UKumkani Mpendulo Zwelonke Sigcawu
Ikumkani yesizwe samaXhosa uKumkani Mpendulo ‘Zwelonke’ Sigcawu, uthi amadoda makaziqhelise ukwenza izinto ngendlela echanekileyo alandele isiko kwaye anyaniseke ukunqanda ingxabano nembambano yabafazi abaninzi.
Le kumkani ibiphefumla ngemeko eqhubeka kwikhaya lakwaMkono eMchonkco, eNgqeleni, nekulapho kugquba ukungaboni ngasonye phakathi kwabafazi ababini benkosi engasekhoyo. Umzimba kaNkosi Velile Mkono sele ugcinwe emkhenkceni kususela ngomhla we-7 kweyeNkanga 2015. Umyolelo ngendawo emakungcwatyelwe kuyo umzimba wale nkosi ngoyena nomji wale mbambano.
Ukumkani Zwelonke uthi ayithandabuzeki into yokuba inkosi ingcwatyelwa kwindawo enamadlaka ooyise mkhulu bayo. “Ingxaki esinayo thina bantu bamnyama sixhomekeke kwinkundla zamatyala ukusombulula imbambano zamakhaya. Lusapho olunoxanduva lokwaba abafazi ngokobungakanani,” utshilo uKumkani Zwelonke.
Ukumkani Zwelonke uthe: “Amadoda makohlukane nokwenza izinto nokuhlala emizini yabafazi abancinci ngenxa yokumfamekiswa luthando. Ukusombulula le mbambano yakwaMkono makubuyiswe le nyewe enkundleni, izokuxoxwa ekhayeni”
Ukumkani uZwelonke uthi ukuba kungahlalwa esikweni zingaphela iimbambano ngemeko yesithembu.
Kusenjalo, uSaziso Mkono ongunyana womfazi omncinane uNonzwakazi Mkono, uthi ngomhla we-11 kuCanzibe bazokubhenela enkundleni befuna bakhululelwe umzimba.
Uthi sele belufumene uxwebhu lwamagqwetha omfazi omkhulu oluchaza ukuchasa inyathelo lokufuna ukukhululelwa umzimba ngokomyolelo wenkosi engasekhoyo. “Asinakuze sinikezele siyeke utata wethu angcwatyelwe kwindawo angafuni kuyo. Umzi ekwangcwatyelwa kuwo umfazi omdala ongasekhoyo kunyaka ophelileyo ngowam, ngokomyolelo katata. Akukho nto izokujika apho,” utsho uSaziso.
Ngokwengxelo, iindleko zokugcina umzimba zinyuka umhla nezolo, kwaye kulindeleke kubekho iintlanganiso phakathi kosapho lomfazi omncinci nendawo ekugcinwe kuyo umzimba ukuqwalasela umba weendleko. Kulindeleke eli tyala libuyele enkundleni yamatyala ebutsheni benyanga ezayo.
Kukho iingxelo ezithi imbalelwano ethunyelwe yinkundla yezibheno eBloemfontein isiya kusapho lomfazi omncinci, ibingenaso isitampu senkundla nto leyo ishiye imibuzo.